Sakoroka tetsy amin’ny ENS Ampefiloha: tora-bato sy lakrimozena, mpianatra efatra naratra | NewsMada
Sakoroka tetsy amin’ny ENS Ampefiloha: tora-bato sy lakrimozena, mpianatra efatra naratra
Tapaka nandritra ny adiny roa ny fifamoivoizana noho ny fihetsiketsehana nataon’ny mpianatry ny ENS, Ampefiloha, omaly. Nisy ny fandorana kodiarana nataon’ireo mpianatra. Velona ny tora-bato. Niraraka ny lakrimozena nalefan’ny Emmo/Reg. Mpianatra efatra no naratra.
Nitranga indray ny sakoroka teny amin’ny sekoly ambony mampiofana ho mpampianatra (ENS), omaly maraina. Taorian’ny fivoriambe nataon’ny mpianatra tao amin’ny efitrano fivoriana, tapaka fa hivoaka ny faritry ny ivontoeram-pampianarana izy ireo, niaraka tamin’ny sora-baventy. Nandoro kodiarana izy ireo rehefa tonga tety ivelany ary nibahana ny arabe. Tapaka nandritra ny fotoana maromaro ny fifamoivoizana.
Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandefa entona mandantsa-dranomaso toy ny mahazatra. Valo teo ho eo ny nalefan’izy ireo teny amin’ny mpianatra izay namaly tamin’ny tora-bato. Nalain’ny mpitandro filaminana ny sora-baventy nentin’ny mpianatra ka tsy nanaiky ny mpitarika ny hetsika ary naka izany teny amin’izy ireo. Teo no naharatran’ny mpitarika ny fikambanan’ny mpianatra, Ratianarivo Dagué sy ny mpianatra telo hafa satria nikasi-tanana ny mpitandro filaminana. Tsy nitazana fotsiny fa nanao fanelanelanana ny tomponandraikitry ny fampianarana tao amin’ny ENS, nilaza fa tsy tokony hikasi-tanana mpianatra ny mpitandro filaminana ary tsy tokony handefa entona eny amin’ny mpianatra. Naharitra ora roa ny savorovoro sy ny fifandonana ary niravona ihany nony farany. “Vita ny hetsika omaly fa miankina amin’ny fivoriamben’ny mpianatra sy ny fahatongavan’ny tomponandraikitry ny Fanabeazana ao amin’ny ENS, anio, ny mety ho tohiny”, hoy ny mpitarika.
Tsy ny minisiteran’ny Fanabeazana irery fa ny minisitera maromaro toy ny asam-panjakana, Fitantanam-bola no voakasiky ny fitakian’ny mpianatra fa hatreto ny minisiteran’ny Fanabeazana ihany no mbola nampanantena fa hametraka fifanarahana.
Tsiahivina fa mitaky ny hamerenana ireo mpianatra mahazo ny diplaoma “licence” eny amin’ny minisiteran’ny asa sy ny asam-panjakana ho “categorie 3” izy ireo fa tsy “catégorie 5” toy ny amin’izao fotoana. Tokony hosokajiana ao anatin’ny “catégorie 8” kosa ireo manana ny “masters”. Ankoatra izany, takian’izy ireo koa ny handraisana avy hatrany ireo mpianatry ny ENS ho mpiasam-panjakana rehefa vita ny fianarana ao.
Niditra an-tsekoly ny Emmo/Reg
Omaly ihany teny amin’ny LMA Ampefiloha, niverina an-dakilasy ireo mpampianatra ary tonga maro ny mpianatra. Tonga teny an-toerana koa anefa ireo mpampianatra avy amin’ny sendika manao fitokonana.
Nihatrana ireo mpitandro filaminana ary niditra tany an-tsekoly mihitsy nanara-maso izay mety ho fanakorontanana. Nampatahotra ny mpianatra ny nahita azy ireo nirodorodo eraky ny sekoly ary vao maika tsy nampifantoka ny sain’ny mpianatra.
Nilamina ny teny amin’ny LMA satria tonga nidinika am-pilaminana ireo mpitokona fa tsy namboly korontana araka ny ahiahin’ny mpiandro filaminana.